Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo » Otrik'aretina COVID Monster Vaovao: Miala amin'ny vaksiny, miparitaka haingana
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • Vaovao farany momba an'i Afrika Atsimo • Vaovao farany momba ny UK
Vaksiny na tsia - mety tsy hitondra fiovana lehibe ho an'ny virosy COVID vaovao izany, ny sasany dia miantso ny monster.
Miparitaka any Afrika Atsimo ny variana amin'izao fotoana izao.
Ny variana coronavirus vao fantatra izay niparitaka tany Afrika Atsimo no tena mampanahy indrindra izay hitan'ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana britanika satria nitombo avo roa heny ny isan'ny fiovan'ny variana Delta ao anatin'izany ny sasany mifandray amin'ny fialana amin'ny valin-kery.
Mpandeha iray avy any Afrika Atsimo no nitondra ity otrikaretina ity tany Hong Kong ary mitoka-monina ao amin'ny seranam-piaramanidina amin'izao fotoana izao. Nisy mpandeha hafa iray tany Botswana nanana ny karazany vaovao.
Ny masoivoho fiarovana ara-pahasalamana UK dia nilaza fa ny variana - antsoina hoe B.1.1.529 dia manana proteinina spike izay tsy mitovy amin'ny an'ny coronavirus tany am-boalohany izay mifototra amin'ny vaksiny COVID-19.
Izy io dia misy fiovana izay mety hialana amin'ny valin'ny hery fiarovana nateraky ny otrikaretina teo aloha sy ny vaksiny, ary koa ny fiovana mifandraika amin'ny fitomboan'ny aretina.
Ho setrin'izany dia hiditra ao anaty lisitra mena i Afrika Atsimo, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia ary Zimbaboe ny zoma 12.00 Novambra amin'ny 26 ora atoandro.
Hisy ny fandrarana ny sidina ara-barotra mivantana sy tsy miankina rehetra avy amin'ireo firenena ireo manomboka amin'ny 12.00 antoandro Zoma 26 Novambra ka hatramin'ny 4 maraina Alahady 28 Novambra.
Raha efa tany amin'ireo distrika ireo ianao ary tonga tany Angletera teo anelanelan'ny 12.00:26 antoandro ny Zoma 4 Novambra sy 28 maraina Alahady XNUMX Novambra, dia:
tsy maintsy manaraka torolàlana manokana momba ny fomba hamitana ny endrika fitadiavana mpandeha
dia tsy maintsy akantoka any an-trano na amin'ny trano fonenana mety
afaka mahazo maimaim-poana PCB fitsapana hatao mandritra ny confinement
Cuthbert Ncube, filohan'ny Birao fizahantany afrikanina hoy: Ny Birao Afrikana momba ny fizahantany dia manaraka ity vaovao ity amin'ny fanahiana lehibe. Vonona hiatrika izany fanamby izany izahay ary hijoro amin'ny mpikambana sy ny fizahan-tany tahaka ny nataonay nandritra izao krizy izao.
Nigel Vere Nicoll, Filohan'ny ATTA naneho hevitra:
"Ny fanambaran'ny sekretera momba ny fahasalamana UK, Sajid Javid androany hariva fa tamin'ny fahitana ny variana Covid vaovao dia firenena enina atsimon'i Afrika no hampidirina ao amin'ny lisitra mena UK manomboka ny mitataovovonana ny zoma GMT, miaraka amin'ny sidina voarara vetivety, dia tonga toy ny kapoka tanteraka ho an'ny mpikambana rehetra. Na dia tsy maintsy jerena aza ny fiarovana ny rehetra voakasik'izany, dia mahavaky fo ny nitrangan'izany tamin'ny indostria iray izay miady mafy hiverina amin'ny toerany taorian'ny 20 volana lasa.
Hiara-hiasa akaiky amin'ny governemantan'i Afrika Atsimo, Namibia, Zimbaboe, Botswana, Lesotho ary Eswatini izahay mba hahatakarana ny fiantraikan'ity fanambarana ity sy ny fomba ahafahantsika manohana ny mpikambana sy ny mpanjifany.”